लन्डनबाट इशा गुरुङले पोखिन एसिड पीडितको बारेमा सरकार र पत्रकार संग आक्रोश। हेर्नुहोस भिडियो दरिलो प्रहार सहित ! - Enepalese.com
लन्डनबाट इशा गुरुङले पोखिन एसिड पीडितको बारेमा सरकार र पत्रकार संग आक्रोश। हेर्नुहोस भिडियो दरिलो प्रहार सहित !
इनेप्लिज २०७५ जेठ २४ गते ११:०८ मा प्रकाशित
बिदेशमा बसे पनि नेपाल र नेपालीकै लागि आफुलाई समर्पित गर्ने केहि सामाजिक अभियन्ता मध्येमा पर्छिन् इशा गुरुङ्ग । बेलायत बासि १ छोरीकी आमा समेत रहेकी इशा नेपालमा कोहि कसैलाई आपत पर्यो भने उनी चुपालागेर बस्न सक्दिनन् । उनले नेपालका विभिन्न संघसंस्था, व्याक्तिहरुलाई सहयोग गरिसकेकी छन् । कहिले अभियान चलाएर सहयोग गर्छिन् कहिले आफ्नो पकेटबाट गर्छिन् तर उनी चुप लागेर भने बस्न सक्दिनन् । अहिले चार बर्षकी ब्लड क्यान्सर पीडित कृश्टिना सुनारका लागि उनी दिनरात नभनी अभियान चलाई ५ लाख भन्दा बढी रकम रबि लामिछाने मार्फत हस्तान्तरण भएको थियो। उनी भन्छिन् म बेलायतमा भएपनि मन भने नेपालमा नै छ, नेपालीकोपीडाले सबैभन्दा बढी छुन्छ मलाई । कोहि कसैले नेपालको बारेमा नराम्रो बोल्यो भने पनि म चुपलागेर बस्न सक्दिन ।
इशाले अहिले एसिड पिडित बिरमान महर्जनको उपचारको लागी अभियान अन्तिम चरणमा पुगी सकेको जानकारी दिनु भएको छ छिट्टै उहाले फेसबुक लाइव मार्फत सकंलन रकम सार्बजनिक गर्नु हुनेछ । उनले एसिड पिडित बिरमान महर्जन लगायत पछिल्ल्लो समयमा एसिड पिडित चेली हरु को बारेमा आफ्नो आवाज सरकार र पत्रकार सामु गुनासो पोख्नु भएको छ।
बिस्तृत जानकारी सहित हेरौ उनको यो भिडियो !